Waa Warey sharuudaha kenya lama aqbali karee Wixii dhiig lahow kaca | Somalisan.com
Home Afsomali Waa Warey sharuudaha kenya lama aqbali karee Wixii dhiig lahow...
Waa Warey sharuudaha kenya lama aqbali karee Wixii dhiig lahow kaca
Kenya waxay bixisaa shuruudo ay jeceshaya in lagu xalliyo khilaafka kala dhaxeeya oo ah 3 aan qof Somali ah u cuntameyn aqriso
Kenya ayaa soo saartay saddex shuruudood oo lagu xallinayo khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya iyada iyo soomaaliya.
1 Taliska Nayroobi wuxuu doonayaa in Dowlada Somalia si deg deg ah uga saaro Maabka khariidadda, lagu soo bandhigay shir dhaqaale oo ka dhacay Boqortooyada Ingiriiska, waxayna Kenya sheeganeysaa in uu yahay qayb ka mid ah dhulka Kenya.
2 Kenya ayaa sidoo kale dalbatay in mas’uuliyiinta Soomaaliya ay ku wargeliyaan dhamaan shirkadaha iibsaday shidaal iyo gaas ku yaal xayeysiinta London ee ah in waddanka Somalia aysan ka mid aheyn degaankaas.
Tan seddexaad, Kenya waxay doonaysaa in dood baddan oo u dhaxaysa labada waddan ay iskugu yimaadaan xal nabadeed oo ka baxsan maxkamadda caalamiga ah wacwadii loo gudbiyeyna ay Somalia ka laabato.
Haddaba , Xoghayaha Maamulaha Arrimaha Dibadda Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya ay rajeenayso in saddexda shuruudood ay tahay in ay la kulmaan xaalad horudhac ah oo dib loogu soo celinayo xiriirka diblumaasiyadeed ee Soomaaliya, taas oo ka dhigtay Sabtidii.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Soomaaliya ayaa diiday beenin kasta oo saliideed ama gaas ah sida lagu sheegay Warsaxaafadeed Dowladu soo saartay .
“Soomaalidu hadda ma bixinayso, mana lahan wax qorshe ah oo ay ku bixiso, wax walba oo ka mid ah goobaha badda lagu muransan yahay illaa inta dhinacyadu ay go’aaminayaan ICJ,” ayaa warqad ka akhrisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Kenya Wasaaradda arrimaha gudaha.
Previous articleVIDEO Mashruuca isku xirka iyo Dayactirka Wadooyinka Afgooye Jowhar iyo Muqdisho oo bilaawday
Next articleKenya gives terms to resolve ocean dispute
Booliska Caalamka oo Ciidanka Booliska Soomaaliya u aqoonsaday kuwa ugu wanaagsan Qaaradda Afrika (DAAWO...
Somalisan News - June 27, 2018
Madaxweyne Farmaajo oo casho sharaf u sameeyey Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Hirshabeelle & Koonfur-Galbeed
Somalisan News - September 22, 2019
Somalisan News - March 31, 2017